Al-shabaab oo Qarax ku dilay Askar ka tirsan Dowladda oo Mooto saarneyd | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-shabaab oo Qarax ku dilay Askar ka tirsan Dowladda oo Mooto saarneyd
Al-shabaab oo Qarax ku dilay Askar ka tirsan Dowladda oo Mooto saarneyd
Askar ka tirsan Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa qarax miino nooca dhulka la geliyo ah ee laga hago meelaha fog-fog lagula eegtay duleedka degmada Janaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxaas ayaa waxaa Askarta oo saarneyd Mooto nooca Soomaalida u taqaano laba lugaaleyda uu ku qabsaday duleedka degmada Janaale, xili ay socdaalayeen, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho ah.
Al-shabaab oo ka hadlay qaraxaas ka dhacay Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay ku sheegteen inay ku dileen Saddex Askari oo ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka, isla markaan ay horey u qaateen Mootada ay saarnaayeen .
Sidoo kale Shabaabka ayaa intaas waxaa ay kusii dareen inay weeraro ku qaadeen Saldhigyo Ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose, mana jiro khasaaro laga soo weriyay weeraradaas.
Si kastaba Al-shabaab ayaa dhowr qaraxyo iyo weeraro toos ah ku qaaday Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan Gobolada dalka, waxaana dhinacyada dhexmaray dagaalo geystay khasaaro.
Maqaal horeDil ka dhacay Magaalada Jowhar iyo Dad ka careysan oo Banaanbax dhigay
Maqaal XigaGuddoomiye cusub oo loo magacaabay degaanka Garasbaaley (Wareegto)